Esi emeghe faịlụ .MHT (nkuzi nkuzi nke atọ) | Site na Linux
Esi emeghe faịlụ .MHT (nkuzi nkuzi nke atọ)
Enwere m omume nke ịchekwa ọtụtụ nkuzi m hụrụ na net, ozi ọma, edemede ọ bụla m weere dị ka ihe na-atọ ụtọ, na n'ụzọ dị otu a mgbe m nwere ajụjụ / nsogbu ọ bụla, enwere m ike ịjụ nkuzi, wdg.
Isi ihe bụ na m na-azọpụta ha, mana ọ bụghị dị ka a na-emekarị ... M na-eji usoro ahụ mgbe niile MHT. Ana m eme ya dị ka nke a n'ihi na ọ na-ewute m (na otutu) na faịlụ ahụ .HTML na mgbe ahụ a na nchekwa na ihe oyiyi, na nchekwa bụ n'elu na .HTML na ikpeazụ ma ọ bụ ikpeazụ nke ndekọ na-amasị m ya. Mgbe ị na-azọpụta ha MHT otu faịlụ a na-echekwa nke nwere ihe niile, ebe ihe niile dị mma na ọnụ hehe.
Ma, ka anyị hụ ntakịrị ihe zuru ezu ihe MHT bụ:
(MIME HTML - Multipurpose Internet Mail Extension HTML ma ọ bụ MHT). Ọkọlọtọ nke gunyere n'ime ihe ederede ederede nwere njikọ na mpụga. Ihe onwunwe ndị a nwere ike ịbụ nchekwa nke ihe oyiyi ma ọ bụ ụda. Nke a pụtara na n'otu faịlụ ebe HTML koodu dị, ndị nchekwa nke data itinye na koodu site na iji MIME.
1. Ihe mbụ, anyị ga-etinye Firefox, ọ bụrụ na anyị etinyeghị ya ugbua. Pịa HERE ọ bụrụ na ha enweghị nchọgharị Firefox.
2. Ugbu a, anyị na-emeghe njikọ na-esonụ, ọ ga-etinye mgbakwunye na akpaghị aka:
Nke a ga-emepe igbe na-esonụ:
Anyị ga-eche ihe dịka 4 ma ọ bụ 5 sekọnd ruo mgbe bọtịnụ m na-egosi (Wụnye ugbu a) nọ n'ọrụ, ozugbo anyị nwere ike pịa ya, anyị na-eme ya na voila, a ga-arụnye mgbakwunye ahụ.
3. Ka anyị bidogharịa Firefox.
Njikere, anyị enweela ihe mgbakwunye dị mkpa (addon, ngwa mgbakwunye, mgbakwunye) awụnyere iji mepee .MHT na Firefox.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Esi emeghe faịlụ .MHT (nkuzi nkuzi nke atọ)
na kwa iji chekwaa ya ka ọ bụ eziokwu, ọ dị ezigbo mma, n'ezie o mere ya mana mgbe ahụ ihe nchọgharị ndị ọzọ emegheghị ya, na ọ zoputara ibe ahụ na folda ya, mana ị kwuru eziokwu, ọ na-ewe iwe na enweghị ahụ iru ala, na mgbe ụfọdụ ihe na-efu na ibe.
Daalụ enyi dị ezigbo data, m bụkwa onye na-akwado ịchekwa nkuzi na isiokwu,
Aga m etinye ya.
Arụnyere na ịrụ ọrụ nke ọma, ọ na-egosi na ị dị ukwuu.
Obi uto inyere aka 😀
Ndo maka nsogbu a nwere ike ibute gị, ị gaghị enwe nkuzi iji wụnye firewall KDE na Debian?
Lee anya ịhụ nke a nke dị n'ọkwa sistemu:
Daalụ obi ike, Aga m ahụ ma m nwere ike iwunye ya na Debian.
Gracia Gaara, ọnụ ahụ nyeere m aka nke ukwuu, agara m peeji niile na ntuziaka nke m budatara na usoro a ma a hazie ihe niile. Ugbu a, m na-eche ịgbanwe ihe niile na pdf iji nwekwuo ndakọrịta.
Gnome-Shell dị na LMDE
Gnome-Shell dị na ule Debian